मलाइ जस्तो तनाव शत्रुलाई पनि नपरोस्, हल्ला मात्रै हो राजीनामा: डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ – Clickmandu
मलाइ जस्तो तनाव शत्रुलाई पनि नपरोस्, हल्ला मात्रै हो राजीनामा: डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ
क्लिकमान्डु २०७६ माघ ६ गते १८:४५ मा प्रकाशित
अनियमितताको आरोप लगाउँदै सरकारको निर्देशनमा गत कात्तिक १८ गते राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपको छानविन गर्न सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्धय सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानविन कमिटि गठन गरेको थियो । उक्त कमिटि गठन भएकै दिनदेखि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए । उक्त समितिले गत मंसिर २४ गते राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति समक्ष छानविन प्रतिवेदन बुझायो । र, मंसिर २५ गते राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन बुझायो । अर्थमन्त्रालयले ३ हप्ता प्रतिवेदन होल्ड गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझायो । र, गत साताको मन्त्रिपरिषदले छानविन प्रतिवेदनले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपहरु पुष्टि नगरेको भन्दै उनलाई सफाइ दिने निर्णय गर्यो । सरकारले सफाइ दिएपछि श्रेष्ठ ७७ दिनपछि डेपुटी गभर्नरको कुर्सीमा पुनर्बहाली भएका छन् । पुनर्बहाली भएलगत्तै क्लिकमाण्डूका लागि दिलु कार्कीले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
निलम्बनमा परेपछिका साढे २ महिना कसरी बिताउनुभयो ?
यो समय तनाव लिएर बित्यो । घरपरिवार साथीभाई सबैलाई तनाव भयो । एउटै कुरा धेरैलाई सम्झाउनुपर्ने भयो । कतिपयले बैंकिङ क्षेत्र बुझेको हुनाले धेरै बुझाउनु परेन । छानबिन हुँदै जाँदा क्लियर हुन्छ भन्नेमा म आफू विश्वस्त थिएँ ।
अढाइ महिनापछि यसरी राष्ट्र बैंक फर्किए डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ (फोटो फिचर)
जसले बुझेको थिएन मलाई साथ दिनेहरुले पनि तनावमा बिताउनुपर्यो । मैले जहिले पनि कानूनको पालना गरेर काम गरेको थिए । त्यो हुँदा मलाई डर थिएन । पत्रपत्रिकामा नियोजित रुपमा गलत रुपले प्रचार समेत गरेको पाइयो । त्यो देखेर कतिले त डराएर मलाई फोन पनि गरे ।
पुर्नबहालीमा सोमबारको दिन साइत हेराएर आउनु भएको त होइन नि ?
आइतबारदेखि हाजिर हुने कुरा थियो । तर अर्थमन्त्रालयबाट पत्र आउन ढिला भएकाले एकदिन ढिलो भयो । सोमबार राम्रो दिन पनि हो । साइत भने हेराएको होइन । आज एकादशी पनि हो । राम्रो दिन पनि छ ।
शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध राज्य लाग्यो भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । तपाईंको आत्माले के भनेको थियो ?
राज्य लागेको भन्नु भएन । यसमा विभिन्न बेनामे उजुरी पर्यो । यसमा छानबिन गर्ने कुरा भयो । प्रशासनिक कुरामा छानबिन भनेको सामान्य हो । कसैले उजुरी गर्यो सरकारले छानबिन गर्नसक्छ । पहिला पनि यस्ता खाले छानबिन अरुको विषयमा पनि हुन्थ्यो ।
निष्पक्ष रुपमा छानबिन भएको थियो । यसले एउटा सन्देश पनि के दिएको छ भने आफूले कानून अनुसार काम गर्ने हो भने कसैले बेनामे उजुरी हालेको छ भने दुःख दिने खालका मान्छेले दुःख दिन सक्छन् ।
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पुनर्बहालीमा जे देखियो,… भन्छन्- सत्यको जित भयो
कात्तिक १७ गते र अहिलेमा आफूले के भिन्नता पाउनुभयो ?
अहिले सबैले मलाई फसाउन खोजेको कुरा सबैले बुझे । नचाहिँदो उजुरी हालेको स्पष्ट पनि भयो । बैंकिङ सिस्टमले बुझे । राष्ट्र बैंकलाई आक्रामण र हस्तक्षेप समेत थियो । राष्ट्र बैंकमा पारदर्शी तरिकाले काम हुन्छ भन्ने बुझाइ सबैमा भयो ।
सामूहिक निर्णय हुने हुँदा तपाई जोगिनुभयो भन्ने बजारको बुझाइ छ, के त्यस्तै हो ?
राष्ट्र बैंकमा कानून अनुसार काम हुन्छ । हामी गलत काम गर्न सक्दैनौं । जुनियर अफिसरबाट टिप्पणी उठाउने सम्बन्धमा कानून अनुसार उठ्ने हो । कानून मिचेर टिप्पणी उठ्ने काम हुँदैन ।
मैले निर्णय लिँदासम्म धेरै प्रक्रिया पार गरेर आएको हुन्छ । त्यसपछि गभर्नरकहाँ पुग्ने हो । बाँकी निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो । एक्लै डेपुटी गभर्नरले केही पनि गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा सबै सञ्चालकहरु पनि जिम्मेवार हुने हो ।
तपाईंलाई अनुसन्धान शुरु भएपछि राष्ट्र बैंकभित्र २ वटा गुट भयो, तपाईले यसलाई अब कसरी हटाउनुहुन्छ ?
यो भएको होइन । यो हल्ला मात्रै हो । राष्ट्र बैंकका सबै कर्मचारीले मलाई सहानुभूति राखेका थिए । म फसेँ भने सबै फस्ने कुरा हुन्छ भन्ने सबै कर्मचारीलाई भएको थियो । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने काम गर्नेछु ।
गभर्नरको रेसमा तपाई अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
डेपुटी गभर्नर कानून अनुसार नै गभर्नर बन्ने लाइनमा हुन्छ । कानूनले नै एकजना डेपुटी गभर्नरलाई अनिवार्य गभर्नरका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुन्छ । सो व्यवस्था अनुसार गभर्नर नियुक्त हुने समयमा स्वभाविक रुपले डेपुटी गभर्नर दाबेदार हुन्छ । गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारको कुरा हो । सरकारले जो योग्य छ त्यसलाई नियुक्त गर्ने हो ।
तपाई अब गभर्नरमा नियुक्त हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो क्रिकेट र फुटबल खेलेको जस्तो म फस्ट हुन्छु वा सेकेन्ड हुन्छु भन्ने होइन । म स्वभाविक दाबेदार हो । सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार राख्छ ।
तपाईंलाई सरकारले सफाइ त दियो । अब तपाईंले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने बजार हल्ला छ नि ?
मलाई पनि १/२ जनाले सोधेका थिए । यत्तिको तनाव लिएर सफाइ पाएपछि राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । क्लिनचिट लिनसक्नु नै कर्मचारीका लागि ठूलो कुरा हो । जागिरे जीवनमा यस्ता तनावको काम शत्रुलाई पनि नपरोस् । समाजमा बेइज्जत हुन्छ । तनावबाट मुक्ति पाउनु नै ठूलो कुरा हो ।
७७ दिनसम्म मानसिक तनावलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो ?
तनाव स्वभाविक रुपमा हुन्छ । यो जथाभावी रुपले बोल्दै हिँड्नु भएन । खुसीमा नमात्तिनु र दुःखमा नआत्तिनु भनेजस्तो गरेर अगाडि बढ्ने हो । मलाई साथीहरुले असजिलो पार्ने काम गरे । मैले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कानून तथा नियमहरु अध्ययन गर्दै थिए ।
आफूले गरेको काम सम्झँदा आफूले गल्ती गरेको थिएन भन्ने लागेको थिए । कानूनको अध्ययन गर्ने काम गरे । मलाई स्पष्टिकरण सोधियो । छानबिन समितिले ३० दिनमा रिपोर्ट दियो । मलाई ५ दिनको समय राखेर लिखित स्पष्टिकरण सोधियो । बेलुका ६ बजे मलाई घरमा चिठ्ठी आएको थियो ।
मैले ४ दिनमा लिखित स्पष्टिकरण बुझाएँ । त्यो तयार गर्दा २३० स्पष्टिकरण छ । ९९ पेज जवाफ छ । बाँकी अरु अनुसूचि थिए । यसका लागि ४ दिन ४ रात सुतिएन । पहिलेदेखि अध्ययन गरेको हुँदा मलाई सजिलो भयो । त्यो आरोप मिथ्या भएको पुष्टि भयो ।
यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको छानविन प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
राष्ट्र बैंकले गर्यो कोभिड अवधिभरका रेमिट्यान्समा सहजिकरण, कम्पनीबाट सोझै नेपाल रकम पठाउन सकिने
नेपाल बंगलादेश बैँकद्धारा कोरोना कोषमा १ करोड ४५ लाख सहयोग